Sidee loo heli karaa SEO-ga YouTube?
Looma baahna in la yiraahdo YouTube waa adeeg aad u fiican oo lagu buuxiyo tan oo ah walxo fiidiyow oo qiimo leh - laga bilaabo muusikada muusikada oo daboolaya dib u eegisyo DIY ah, kumbuyuutaro fiidiyoow ah iyo waxyaabo kale oo waxtar leh oo aan inta badan raadinayno. Ka hor inta aanan bilaabin barta - sida SEO-channel YouTube - aynu aragno qaar ka mid ah tirakoobyada dhawaan. Ugu horreyntii, YouTube ayaa lagu dhawaaqay inay tahay bogga labaad ee ugu booqashada adduunka - pro tank mini 2 coils shoes. Next, video this martigelinta aad loo jecel yahay waxay u adeegtaa in ka badan bilyan oo macaamiisha firfircoon. Ugu dambeyntii, daqiiqad kasta waxaa jira in ka badan 300 saacadood oo ah fiidiyooga fiidiyoowga ah ee loo soo gudbiyey YouTube. Tirada tiradu waxay u muuqataa mid aad u cajiib leh, eh? Laakiin halkan ayaa ka imanaya dhinaca dambe ee bilada - iyada oo tixgelineysa baahi weyn oo loo qabo in ay ku istaagto meelaha dadku ku badan yahay, sida loo helo SEO-yada YouTube-ka oo ogaado? Waa waqtigii la hubin lahaa.
Sida muuqaalka asalka ah ee raadinta Mashiinka Raadinta ee Google ee SERPs, YouTube SEO wuxuu ku bilaabmaa cilmi-baaris muhiim ah. Waxaan loola jeedaa qoraallada qoraalkaaga oo dhan, laga bilaabo cinwaanka ilaa sharaxaadda fiidiyowga ama metadata dhammaantood waxay ku saabsan yihiin isticmaalka saxda ah ee ereyada muhiimka ah iyo odhaahaha muhiimka ah. Iyadoo la tixgelinayo ereyada muhiimka ah ee ugu muhiimsan, wax waliba waa sahlan. Hase yeeshee, haddii baadhitaan lagu sameeyo natiijooyin gaar ah oo ku saabsan ereyada muhiimka ah ee dheeraadka ah, halkan waa laba hab oo kala duwan oo lagu dhammaystiro hawsha.
Doorasho buuxda oo buuxa
Isticmaalidda muuqaalka tooska ah ee fayl-gelinta buuxsashada waxay ku siin karaan faham wanaagsan iyo qaar ka mid ah fahamka shuruudaha ugu sarreeya ee keywords keywords bartilmaameedkaaga. Kaliya isticmaal isticmaalka gawaarida YouTube-ka si aad u qaabeyso liiska hubinta hore ee ereyada muhiimka ah iyo odhaahyada. Waxaad sidoo kale waraysan kartaa tartamayaashaada si aad u aragto ereyada ay ku qeexayaan darajada sare. Xayiraadda xataa qoto dheer dhammaan natiijooyinka raadinta ee la xidhiidha, waxaad sidoo kale isticmaali kartaa qalab soo jeedin ah sida SEO Chat, ama qaab kasta oo la mid ah oo la heli karo oo ku.
Qalabka iyo erayada ereyada muhiimka ah
Marka aad sameysey liis hordhac ah ereyada bartilmaameedkaaga, waxaad u baahan doontaa inaad qiyaasto kartidooda dhabta ah. Waxaad ku hubin kartaa qiimaha raadinta ee keywords kala duwan, waxay qiyaasaan tartankooda, iyo in aad tijaabisid fikradahaada brand-cusub leh badan oo ah qalabyada internetka kala duwan iyo kordhinta browser. Ka mid ah kuwa kale, waxaan u soo bandhigay kuwa soo socda si loogu isticmaalo habka ugu habboon iyo talooyinka waxtarka leh: TubeBuddy, Falanqaynta Nadaafada, VidIQ, iyo Qorshaha Keydlaha Google.
Qaar ka mid ah dadku waxay arkaan SEO sida farshaxan nus, sayniska yar. Dhab ahaan, dhamaanba waxaad u baahan tahay inaad kor ugu qaado natiijooyinka raadinta waa inaad siisid mishiinka raadinta waxa uu rabo sida ugu wanaagsan ee suurtogalka ah - tixgelinta khibradda user-friendly, iyo shuruudaha kale ee farsamo ee ku-oolinta saxda ah. Sidaa darteed, sida loo helo SEO channel channel? Kaliya sii dadka raacsan iyo martida mararka qaarkood waxa ay rabaan, siinta qiimo weyn isla waqti isku mid ah. Nasiib daro, qofna ma gartaa waxa dhabta ah ee saameynaya algorithm raadinta ee YouTube.
Ka shaqeynaya naqshadeynta metadata (waxaad heli kartaa magacyada habboon ee loogu talagalay fiidiyoogaada, caddeeyo iyo xogtaada sharraxaad, isticmaalaan qoraallo fiidiyoow ah iyo qoraallo la xiray oo leh qoraalo la xidhiidha iyo ereyada muhiimka ah);
Ku dadaal dadaalka ku jira tayada fiidiyowga ee tayada leh (dayactirka joogtada ah, ilaaliyaha xifdinta, la socoshada macaamiisha cusub, kormeerka jecel, saamiyada, iyo faallooyinka);
Ka ilaalinta ka qayb qaadashada isticmaalka (sii wad wadaag qorshahaaga bilawga ah ee joornaalada warbaahinta bulshada iyo blogs, raac hababka muhiimka ah ee saacadaha daawashada filimka, muddada fadhiga, iyo isku dheelitirnaanta thumbnails).